दरबारी राग- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १८, २०७६ केशव दाहाल
केहीअघि सुर्खेतबाट गौवधसम्बन्धी दुःखद समाचार आयो । धेरैले टिप्पणी गरे, ‘मान्छे हिजोभन्दा धेरै अनैतिक, भ्रष्ट र मूल्यहीन हुँदै छ ।’ अनेक प्रसंगमा सामाजिक अगुवाहरू भन्छन्, ‘समाज एकांगी र हिंस्रक बन्दै छ ।’ अभियन्ताहरू कराउँछन्, ‘व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले सामाजिक भावनालाई कुण्ठित गर्‍यो ।’ धर्मगुरुहरू भन्छन्, ‘मान्छेमा नैतिकता र अनुशासन हरायो ।’
राजनीतिक विश्लेषकहरू लेख्छन्, ‘राज्यसत्ता स्वयं बेइमान छ ।’ के साँच्चै हाम्रो सामाजिक भावना, अनुशासन र मूल्य–मान्यताको जग भत्कँदै छ ? छ भने, कारण के होला ?
व्यक्तिगत/सामाजिक मूल्यहरूको स्थापना एउटा सामाजिक प्रक्रिया त हो नै, यो मूलतः राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । व्यक्तिको नैतिकता र अनुशासन स्वयंको चरित्रसम्बद्ध मात्र हुन्न, समाज, राज्य र राजनीतिसँग जोडिने विषय पनि हो यो । कुनै पनि देशको राजनीतिक प्रक्रियाले समाजको चरित्र निर्माणमा योगदान गर्छ । यसर्थ व्यक्तिगत/सामाजिक मूल्यहरूको स्थापना व्यक्ति र समाजको मात्र सरोकार होइन, यो मूलतः राजनीतिक कुरा हो ।
आधुनिक समाजमा मान्छेलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा ठूलो विषय हो— राजनीति । राजनीतिक आन्दोलन, अर्थराजनीति, उपरी संरचना र आधारहरूमा हुने फेरबदलले मान्छेलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित गर्छन् । यस्ता प्रभाव कहिले सकारात्मक हुन्छन् त कहिले नकारात्मक । कहिले राजनीतिले मान्छेलाई अनेक विरोधाभासमा जाकिदिन्छ र मान्छे निराश बन्छ । कहिले राजनीतिले मान्छेमा उत्साह सिर्जना गर्छ र ऊ आशावादी बन्छ । त्यही आशा र निराशाले मान्छे/समाजको मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । अतः राजनीतिमा देखिने कमजोरीलाई जस्ताको तस्तै राखेर मान्छेलाई उत्साहित र अनुशासित गर्छु भन्नु वाहियात हो ।
मान्छेहरूले भनेजस्तै, के हाम्रो सामाजिक अनुशासन बिग्रिएकै हो ? प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ— राजनीतिमा उन्नत व्यवस्था ल्याउने तर समाज भने झन्झन् मूल्यहीन हुँदै जाने, यो कसरी सम्भव छ ? निश्चयै राजनीतिक व्यवस्थामा आउने परिवर्तनसँगै समाज अझ धेरै उत्साहित, अनुशासित र सिर्जनात्मक हुनुपर्ने हो ।
किन उल्टो हुँदै छ त ? यसको सीधा अर्थ हुन्छ— लोकतन्त्रले काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनको गति, भाव र गुण राज्य सञ्चालनमा देखिएको छैन । परिणामतः मान्छेहरू तीव्र निराशामा फसे । र, समाजले स्वाभाविक सिर्जनशीलता समाउन सकेन । यो अर्थमा लोकतन्त्रको मूल्यहीनता नै नेपाली समाजको मूल्यहीनताको पछिल्लो कारण हो । कुरा सरल छ, ७० वर्ष लडेर ल्याइएको लोकतन्त्रले काम गर्दैन भने समाज कसरी उत्प्रेरित हुन्छ ?
७० वर्षदेखि सुनेको मार्क्सवादले काम गर्दैन भने समाज कसरी गतिशील हुन्छ ? पटक–पटकका आन्दोलनले मान्छेको जीवन बदल्दैनन् भने समाज कसरी ज्ञानी, शालीन र सभ्य बन्छ ? अनेकबार नारा लगाएको समाजवादले काम गर्दैन भने मान्छे कसरी आश्वस्त हुन्छ ? स्वभावतः सपना मरेको समाज गतिशील हुँदैन । त्यस्तो समाज या त मौन बस्छ वा उल्टो हिँड्छ । उल्टो हिँड्नु भनेको अराजक हुनु, असहिष्णु हुनु र अनुशासनहीन हुनु हो ।
लोकतन्त्र कसरी परिणामहीन हुँदै छ ? हामीसँग प्रशस्त उदाहरण छन् । गतसाता हामी केही साथीले तुलसीपुर, दाङको यात्रा गर्‍यौं । बाटामा अनेक खोलाखोल्सा थिए । तिनमा पुल असरल्ल भेटिन्थे । कुनै आधा बनेर छोडिएका । कुनै भर्खर बनाउन सुरु गरिएका । कुनै सकिन–सकिन लागेका ।
स्थानीय बासिन्दा भन्थे, ‘बितेका दस वर्षदेखि धूलो, बाढी र अव्यवस्थाको सास्ती भनिसाध्य छैन ।’ सहरमा न राम्रो अस्पताल छ, न त राम्रो कलेज । एसियाकै दोस्रो ठूलो उपत्यका हो दाङ । उर्वर र सुन्दर छ, तर बितेका ३० वर्षमा कुनै परिवर्तन छैन । यत्रतत्र भ्रष्टाचार तीव्र छ । अस्पतालमा मान्छे प्रताडित छन् । न त औषधी न उपचार । स्कुलहरू कमजोर छन् ।
तुलसीपुरमै भेटिएका एक युवकले भने, ‘कहाँ छ लोकतन्त्र ?’ बितेका ७० वर्षदेखि जनताको माग एउटै छन्— लोकतन्त्र, विकास, न्याय, सुशासन, समाजवाद ! तिनै युवाले प्रश्न गरे, ‘जब बोल्नेहरूको स्वरलाई दरबारी रागले गतिहीन र अर्थहीन बनाउँछ, बोलेर के हुन्छ ? चुपचाप बस्नुको अर्थ यो होइन कि सबै ठीकठाक छ । बरु चुपचाप बस्नु राज्यलाई अविश्वास गर्नु हो । चरम निराशामा या त मान्छे बिच्किन्छ या चुप लाग्छ । एउटा ‘फ्रस्ट्रेटेड’ समाजले दिने त्यही नै त हो, मूल्यहीनता !
समाज निर्माणको आफ्नै लय हुन्छ । समाजले आफैभित्र र बाहिरका अनेक अन्तरसंघर्षबाट सभ्यता निर्माण गर्छ, जसलाई प्रभावित गर्छन् मुख्यतः तीन विषयले । पहिलो, बाँच्नका लागि मान्छेले गरेका संघर्षहरूले समाजमा श्रमको महत्त्व स्थापित गर्छन् । दोस्रो, व्यक्ति, समाज, प्रकृतिसँगको अन्तरसम्बन्ध समाज निर्माणको अर्को सशक्त पक्ष हो, जसमा आफ्नै दुःखसुखका कथा हुन्छन्, जसमा धर्म, संस्कार, संस्कृति निहित हुन्छन् । यसले समाजको भावना र भावुकता निर्माण गरिदिन्छ ।
तेस्रो, समाजलाई ठीकठाकसँग राख्न यसले आफ्नो राजनीति तय गर्छ । यसरी सामाजिक ज्ञान, भावना, उत्प्रेरणा, आविष्कार र त्यसको व्यवस्थापन नियमित हुँदै जान्छ, जुन समुच्चमा सामाजिक सभ्यताका रूपमा प्रकट हुन्छ । यदि यो प्रक्रिया सन्तुलित, सिर्जनशील र उत्तरदायी छ भने समाज शिष्ट, शालीन र सन्तुलित हुँदै जान्छ । अन्यथा समाज उग्र, भ्रष्ट, हठी, एकांगी र मूल्यहीन हुँदै जान्छ ।
हाम्रो समाज बितेका ७० वर्षमा सबैभन्दा ठूलो संक्रमणबाट गुज्रिँदै आयो । हाम्रो श्रमसत्तामा ठूलो उथलपुथल भयो । यसबीच बसाइँसराइ, उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, श्रम पलायन, जातीय, धार्मिक र राजनीतिक सत्तासँगको टकराव निकै सशक्त रहे । निश्चयै, यसबीच हामीले अनेक सामाजिक तथा राजनीतिक उथलपुथल भोग्यौं । कतिपय व्यवस्था विघटित पनि भए, तर नयाँ पद्धति निर्माण गर्न सकिएन । पुरानो श्रम व्यवस्थाबाट मान्छे पलायन त भयो, तर नयाँ उत्पादन प्रणालीमा जान सकेन ।
पुराना सामाजिक व्यवस्थाहरूलाई हामीले प्रश्न गर्‍यौं, तर नयाँ, उन्नत र लोकतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्थाहरू बनेनन् । समाजलाई जोड्ने पुराना भावुकतामा हामीले हम्मर चलायौं, तर नयाँ कथा बनाउन सकिएन । सबैभन्दा खतरनाक कुरा, समाजको सबैभन्दा ठूलो समूह श्रम नगरी कमाउने धन्दामा लाग्यो । राजनीति गर्ने लाखौं मान्छे श्रमबाट अलग भए । राज्य सञ्चालनमा बिचौलियाहरू हावी हुँदै गए । अनेक द्वन्द्वले मान्छेलाई आक्रामक र हठी बनाउँदै लग्यो ।
सरकार भ्रष्टाचारमा लाग्यो । मन्त्री भ्रष्टाचारमा लाग्यो । ठेकेदार भ्रष्टाचारमा लाग्यो । प्रहरी भ्रष्टाचारमा लाग्यो । डाक्टर भ्रष्टाचारमा लाग्यो । मान्छे धूलोमैलो, रोग र पीडामा छटपटाउँदै रहे, तर शासकहरूको दरबारी रागमा साधारण मान्छेका दुःखको कथा कहिल्यै सुनिएन । सामाजिक तथा राजनीतिक उत्तरदायित्व क्षीण भयो ।
व्यक्तिवाद हावी भयो र त्यसले सामाजिक महत्त्वलाई विघटित गर्‍यो । पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलन र बहस यति रूखा, एकांगी र सपाट थिए, मानवतामाथि खिसिट्युरी गरियो । मान्छेलाई केवल ‘मटेरियल’ का रूपमा हेरियो । तीव्र पार्टीकरणले कार्यकर्ताहरूको मनोबल उठ्यो, तर साधारण मतदाता निराश बन्दै गए । निराश मान्छे भएको समाजमा के अनुशासन, के सामाजिक मूल्य ?
निष्कर्ष बन्छ— समाजको मूल्यहीनता हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियाकै असफलता हो । यद्यपि यो तथ्यलाई आँखा चिम्लिएर सत्ताधारीहरू दरबारिया शैलीमा राग गाउँछन्— ‘ज्ञानी बन ।’ उनीहरू आफू कति धेरै भ्रष्ट, मूल्यहीन र पतित छु भन्ने बिर्सिन्छन् । उनीहरू राज्य कति धेरै ढोंगी र भ्रष्ट हुँदै छ भन्नेबारे बुझ पचाउँछन् । मान्छे ज्ञानी बन्न न त धेरै कठिन छ, न सजिलो । यो मूलतः राज्यले निर्माण गर्ने शैली, संस्कार, संस्कृति, उत्प्रेरणासम्बद्ध विषय हो ।
जब राजनीतिक परिवर्तनहरूले मान्छेको जीवनलाई प्रभावित गर्ने सामर्थ्य गुमाउँछन्, स्वभावतः समाज र व्यक्ति स्वयंका मूल्यहरू विघटित हुन थाल्छन् । सत्य नै यही हो— जब लोकतन्त्र लोकतन्त्रजस्तो हुँदैन, राज्य राज्यजस्तो कसरी हुन्छ ? समाज समाजजस्तो कसरी हुन्छ ? सबै कुरा बिग्रिँदै गएको समाजमा, व्यक्ति पवित्र, नैतिकतावान् र असल रहन कसरी सम्भव हुन्छ ?
नेपाली समाज अहिले राजनीतिक नैतिकताको संकटमा छ । त्यसैको सहउत्पादन हो— सामाजिक मूल्यहीनता । मुख्यतः सामाजिक मूल्य, मान्यता र अनुशासनलाई स्थापित गर्न राजनीतिको गरिमा, मूल्य र महत्त्व स्थापित गर्नुपर्छ । अन्यथा नेताहरूले गाउने ‘सबै ठीकठाक छ’ को रागले मात्र समाजलाई शान्त, सभ्य र अनुशासित राख्न सक्दैन ।
लोकतन्त्र कोरा सिद्धान्त मात्र होइन, समाजको अनुशासन, आशा, अपेक्षा र ऊर्जाको स्रोत पनि हो । अन्यथा लोकतन्त्रमा न रोटी सेकाउन मिल्छ, न त त्यसले पेट भर्छ । थाकेका, निराश र लक्ष्यहीन मान्छेको राग, निश्चयै दरबारको जस्तो सुरिलो हुँदैन । अतः व्यक्ति र समाज बदल्न राजनीति बदलौं, बाँकी मिल्दै जान्छ ।
dahal.keshab@gmail.com प्रकाशित : भाद्र १८, २०७६ ०८:४७
कालक्रममा कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट रहेनन् नै, उनीहरू बिस्तारै वामपन्थी र प्रगतिशील कित्ताबाट समेत स्खलित भए । कुरा स्पष्ट छ, पुरानो विचार, समय र सपनाको वफादार सेवक हुँदैमा कोही प्रगतिशील हुँदैन । प्रगतिशील हुनु भनेको नयाँ युगलाई आह्वान गर्नु हो । अगाडि हिँड्नु हो । परिणाम निकाल्नु हो ।